Inkampani eyaziwayo yaseBrithani yemoto iJaguar iyajabulisa abalandeli ngokushintshwa okusha kwezimoto zamabhizinisi. Ihhovisi lenkampani lisezindaweni zaseCoventry. Kusukela ngo-2008, inkampani ibilokhu iyingxenye yenkampani ethuthukisayo yokuthuthukisa "Tata Motors".
Inkampani Jaguar isebenze ngempumelelo kusukela ngo-1922. Ngalo nyaka uWilliam Walmsley noWilliam Lyons bavula i-SS eqinile (iSwallow Sidecar) e-Blackpool. Ngokushesha ngemva kwesisekelo, inkampani yakhiqiza abahamba ngezimoto. Ngo-1931 impumelelo yokuqala yafika enkampanini.
Ukuguqulwa kokubili kwezemidlalo yemoto i-SS I kuyadalwa:
• I-16HP enekhono lama-46 hp;
• I-20HP ene-58 hp
Ngo-1936 kwavela i-SS 11/2-Liter futhi ilandela i-SS 21/2-Liter imodeli. Lezi zimoto zithole igama elisha elithi Jaguar. Ngakho-ke, uphawu oludumile lwezimoto zamabhizinisi ezinjengezinga eliphezulu livele.
AmaJaguar "Jaguar" - imoto enkulu kubathandi bokushayela okusheshayo
IJep "Jaguar" yenzelwe ukuncintisana okusebenzayo kwezimoto BMW X5 noPorsche Cayenne. Abasebenzi benkampani baye bakhela ipulatifomu entsha yezimoto zokukhanya, ezilawulwa kahle. Umodeli uthembisa ukuthandwa kakhulu esigabeni salo.
Ngakho, kwakukhona izinhlobo ezinhle kakhulu ze-speed-speed SUV Jaguar.
Inketho enkulu yokushayela ehlobo
I-Jeep "Jaguar" (i-cabriolet) - imoto enhle kakhulu ye- S-class ene injini enamandla yevolumu enkulu. Umodeli uhlanganisa umlingiswa wezemidlalo, isitayela nokunethezeka. I-cabriolet smart iyindlela enhle kakhulu yokuhamba ehlobo.
Le moto enhle kakhulu imodeli yenhlalakahle yomnikazi. Izimoto zalolu hlobo zibizwa ngokuthi imishini yezinto ezicebile ze-nargotic egoists. Kulokhu kunenye iqiniso.
I-Jeep "Jaguar" ibiza inani elimangalisayo. Esikhathini sokuhlala ezine, imoto ingalungiselelwa kahle kuphela esihlalweni sangaphambili. Emgqeni wangemuva ugcwele kancane. Uphahla oluhlongoziwe lwe-gig lithatha isikhala esiningi futhi lunwetshwa emasekhondini angu-18. Amakhono wezobuchwepheshe we-convertible ngokuyinhloko ancike ekucubungulweni.
Ukuguqulwa okuvamile kwemoto kungasheshisa ngokushesha ngesivinini se-100 km / h kumasekhondi angu-5-6. Ukuhamba kwe-cabriolet kalula, ngokushesha kusheshisa, ngokudlula ngokuzethemba kudlula ukujika, kuhambisana ngokugcwele nesondo.
I-speed jeep "i-Jaguar" ine-system ekhethekile yokuvikelwa ekuphikeleni. Enye yezinkinga yizindleko eziphezulu zokulondolozwa kanye nemvume yokugcina phansi.
I-Jeep "I-Jaguar" C-X17 - i-crossover emangalisayo yenkampani yaseBrithani. Abaqambi basebenzise izakhi eziningi ze-aluminium kanye nenjini enamandla ene-cylinder engaphansi kwe-Ingenium.
Ochwepheshe bakholelwa ukuthi i-model ye-Jaguar F-Pace entsha, ehlelwe ukukhululwa ngo-2016, izoba enye yezinguquko ezihlonishwa kakhulu ze-SUVs, ezobe ifakwe injini ye-compressor ene-V ene-supercharger.
I-Company Jaguar ihlela ukukhiqiza i-SUV yayo nge-drive yangemuva noma yonke. Ngotshini 2-litre noma idizili enjini engu-2.2-litre kanye namahhashi angu-240. Kungenzeka ukufaka imoto enezilinganiso eziyisithupha zama-3 amalitha amandla angu-345 hp. I-gearshift yenziwa ibhokisi elizenzekelayo eliyisishiyagalombili.
I-injini inikeza ukufinyelela kwejubane lokufinyelela emagqumeni e-torque ephakeme kunoma isiphi isivinini. Lokhu kunciphisa ukulibala phakathi kwesenzo somshayeli kanye nokuphendula imoto okungenani.
Inethiwekhi ayinayo isithombe esisemthethweni samamodeli wakamuva we-F-Pace kusuka ku-Jaguar, kodwa ungathola ama-prototypes womklamo ahlolwe. I-Jaguar ayivivinyi esiteshini sokuhlola esivaliwe, kodwa kumigwaqo ejwayelekile yokusetshenziswa okujwayelekile. Lokhu kusiza ukuhlola ngokunembile ukuziphatha kwemoto emgwaqeni omkhulu wangempela ekugezeni kwezimoto.
Ngokusho kwe-Auto Express, izincintiswano ezinkulu ze-SUV Jaguar zizoba yizibonelo ze-Audi Q5 ne-BMW X3. Imoto entsha, igama elithi Q-Type noma i-XQ kuthiwa selivele libhalisiwe. I-Jag SUV izokwakhiwa ngesisekelo sepulatifomu esetshenziswa yi-BMW 3 Series Series. I-innovative kulindeleke ukuthi ifinyelelwe ngama-overhangs kanye nokuba khona kwezakhi ezithile ze-design ye-sport ye-F-Type.
I-Autoexperts ngemva kokuqhathanisa izithombe ze-Jaguar Jeep, ezitholakalayo, zithi izithombe ezibonakala ngaphandle zifana nezithombe ze-C-X17 Concept. Isikhukhula seJaguar sizodayiswa ekuqaleni kuka-2016. Abathengi bezimoto ezisezingeni elihle sebevele benza izicelo zokuqala zokuthenga imodeli entsha. Wonke umuntu ufuna ukuba ngumnikazi wendabuko yesitayela, ekwazi ukuba yindlela yokuhamba ngokushesha futhi inkomba yenhlalakahle yomnikazi.
Uyinki umphumela Eyelashes "Avon": ukubuyekezwa kanye incazelo